Access Mmezi na Iweghachite Ngwá Ọrụ. Access Idozi Software.
DataNumen Access Repair bụ kasị mma Access idozi na mgbake ngwá ọrụ na ụwa. Ọ nwere ike ịrụkwa ihe rụrụ arụ Access .mdb na .accdb ọdụ data ma weghachite ọtụtụ data gị dị ka o kwere mee, si otú ahụ na-ebelata ọnwụ na nrụrụ faịlụ.
4.90 / 5 (site na 1,502 votes)
Gịnị mere DataNumen Access Repair?
Iweghachite bụ most njirimara dị mkpa nke ngwaahịa nweta mgbake. Dabere na ule zuru oke anyị, DataNumen Access Repair nwere ọnụọgụ mgbake kachasị mma, dị mma karịa ndị asọmpi ndị ọzọ n'ahịa!
Mụtakwuo banyere otu DataNumen Access Repair na-ese anwụrụ mpi
Daalụ maka enyemaka gị.
Ngwa ahụ dị mma. Isi ya dikwa mma.
Mwube 23th, 2020
daalụ. Ngwaahịa ahụ rụọ ọrụ nke ọma.
N'ezie m chọtara azịza gị na nke mbụ 10 mins!
Agbanyeghị ọ bụ ezie na na mbụ, echere m na nke a bụ nnukwu ego iji nọrọ na obere mmemme,
Agbanyeghị ọ bụ ezie na na mbụ, echere m na nke a bụ nnukwu ego iji nọrọ na obere mmemme, DataNumen Access Repair natara nchekwa data anyị ugbu a, enwere m ezigbo obi ụtọ;)
Ihe ọ bụla dị n'ịntanetị
Chaị gị ụmụ okorobịa software bụ egwu m ebudatara ikpe software na ọ bụ ike na-egosi m niile nke tebụl na m nwere kpọmkwem. Nke a sofware
Chaị gị ụmụ okorobịa software bụ egwu m ebudatara ikpe software na ọ bụ ike na-egosi m niile nke tebụl na m nwere kpọmkwem. Nke a sofware nkume ma nyere m aka nke ukwuu.
Daalụ maka ịlaghachikwute m. Enweela m ngwanrọ ahụ wee nweta njikọ iji budata ngwanrọ ahụ ozugbo. M arụnyere ya na ọ na-arụ ọrụ
Daalụ maka ịlaghachikwute m. Enweela m ngwanrọ ahụ wee nweta njikọ iji budata ngwanrọ ahụ ozugbo. M arụnyere ya na ọ na-arụ ọrụ amamiihe!
Zọpụta anụ ezi m! Daalụ!
DataNumen Access Repair weghachite data karịa ngwaahịa ọ bụla m jiri. O nyeere m aka ịchekwa ọtụtụ ọdụ data emerụla. Abụ m
DataNumen Access Repair weghachite data karịa ngwaahịa ọ bụla m jiri. O nyeere m aka ịchekwa ọtụtụ ọdụ data emerụla. Obi dị m ezigbo ụtọ ịchọta ngwaahịa a.
Costume Ngwaahịa Ngwaahịa
ngwá ọrụ gị bụ ihe kachasị mma m nwere ike ịrụkwa faịlụ nnweta maka mahadum maka ojiji nkeonwe na im godiya
Mwube 30th, 2018
Ngwọta maka ịgbaso njehie ndị a na-ahụkarị Nweta Nrụrụ Aka data
Codị data amatabeghị
Akpadoro nchekwa data 'filename.mdb ma ọ bụ na ọ bụghị faịlụ nchekwa data.
Nchọpụta data Jet nke Microsoft achọpụtaghi ihe 'xxxx'.
Enweghị ike ịgụ ndekọ (s); Enweghị ọgụgụ ikike na 'xxxx'.
Main Akụkụ na DataNumen Access Repair v3.8
Nkwado iji rụkwaa Microsoft Access 95, 97, 2000, 2002 (XP), 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 na Access maka ọdụ data Office 365.
Nkwado iji nwetaghachi ihe owuwu na ndekọ nke tebụl dị na ọdụ data nnweta.
Nkwado iji weghachite ubi MEMO na OLE.
Nkwado na- naghachi ehichapụ tebụl na ndia na Access ọdụ data.
Nkwado iji weghachite mpaghara ndị nwere ikike na ndenye aha.
Nkwado iji weghachite mmekọrịta.
Nkwado iji weghachite ajụjụ.
Nkwado iji weghachite paswọọdụ ezoro ezo Access ọdụ data.
Nkwado iji dozie Access mdb na accdb faịlụ na mgbasa ozi rụrụ arụ, dịka diski diski, Zip diski, CDROM, wdg.
Nkwado ịchọta ma họrọ Access mdb na faịlụ accdb ka emezie ya na kọmputa mpaghara, dịka ụfọdụ njirisi.
Nkwado iji rụkwa ọtụtụ Access mdb na faịlụ accdb.
Nkwado mwekota na Windows Explorer, yabụ ị nwere ike ịrụzi mdb na accdb faịlụ na onodu menu nke Windows Explorer mfe.
iji DataNumen Access Repair iji weghachite ọdụ data nnweta rụrụ arụ
Mgbe Microsoft Microsoft ọdụ data (.mdb ma ọ bụ .accdb faịlụ) rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi na ị na-enweghị ike imeghe ha kwesịrị, ị nwere ike iji DataNumen Access Repair i scanomi faịlụ na-agbake data ha ka o kwere mee.
Mara: Tupu ị nwetaghachi faịlụ mdb / accdb rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi DataNumen Access Repair, biko mechie Microsoft Access na ngwa ọ bụla nwere ike gbanwee faịlụ mdb / accdb.
Họrọ faịlụ mdb / accdb mebiri emebi ma ọ bụ mebiri emebi ka arụzie:
Nwere ike itinye aha faịlụ mdb / accdb ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ faịlụ.
Site na ndabara, DataNumen Access Repair ga-echekwa ebe nchekwa data abanye na faịlụ ọhụrụ aha ya bụ xxxx_fixed.mdb, ebe xxxx bụ aha isi iyi mdb / accdb file. Ọmụmaatụ, maka faịlụ ndị mebiri emebi.mdb, aha ndabara maka faịlụ ahụ edozi ga-abụ Damaged_fixed.mdb. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aha ọzọ, biko pịa ma ọ bụ tọọ ya dịka:
pịa bọtịnụ, na DataNumen Access Repair ga start na-enyocha ma na-arụzi faịlụ mdb / accdb. Ogwe ọganihu
Mgbe usoro mmezi ahụ gasịrị, ọ bụrụ na enwere ike idozi nchekwa data mdb / accdb nke ọma, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a, i nwere ike imeghe ofu mdb / accdb nchekwa data na Microsoft Access ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ.
DataNumen Access Repair A na-ahapụ 3.8 na February 23th, 2021
DataNumen Access Repair 3.3 weputara na Disemba 10th, 2020
DataNumen Access Repair 3.1 weputara na October 31th, 2020
DataNumen Access Repair A tọhapụrụ 3.0 na May 27th, 2020
DataNumen Access Repair A na-ahapụ 2.9 na November 18th, 2019
DataNumen Access Repair A na-ahapụ 2.8 na August 5th, 2019
DataNumen Access Repair A na-ahapụ 2.7 na Eprel 18, 2019
DataNumen Access Repair A na-ahapụ 2.6 na Jenụwarị 21th, 2019
Nkwado Nweta 2019.
DataNumen Access Repair A tọhapụrụ 2.5 na October 22nd, 2018
Nkwado Nkwado maka Office 365.
DataNumen Access Repair A na-ahapụ 2.3 na February 11th, 2018
Nkwado Nweta 2016.
DataNumen Access Repair A tọhapụrụ 2.2 na August 10, 2013
Melite ndakọrịta ngwa na DAO na Access.
DataNumen Access Repair A tọhapụrụ 2.1 na Mee 15, 2009
Melite ndakọrịta nke GUI na mkpebi dị iche iche na sistemụ arụmọrụ.
DataNumen Access Repair 2.0 wepụtara na July 16, 2008
Degharịa ngwa niile.
Nkwado Access 2007 ọdụ data.
Kwado Windows Vista.
DataNumen Access Repair 1.2 wepụtara na Nov 19th, 2006
Mee ka igwe nrụzi ahụ ka mma.
Nkwado ịchọta ma họrọ faịlụ MDB ka a rụzie na kọmpụta mpaghara, dịka ụfọdụ njirisi ọchụchọ.
DataNumen Access Repair 1.1 weputara na Disemba 20th, 2005
Nkwado iji weghachite mpaghara ala.
Nkwado iji weghachite ederede.
DataNumen Access Repair A tọhapụrụ 1.0 na June 18, 2004
Nkwado iji rụkwaa Microsoft Access 95, 97, 2000, XP na 2003.
Nkwado iji nwetaghachi ihe owuwu na ndekọ nke tebụl na ọdụ data Access.
Nkwado iji weghachite tebụl ehichapụ na ndekọ na ọdụ data Access.
Nkwado idozi Access mdb faịlụ na mgbasa ozi rụrụ arụ, dịka diski diski, Zip diski, CDROM, wdg.
Nkwado ịrụzi ọtụtụ ngwa Access mdb faịlụ.
Nkwado mwekota na Windows Explorer, n'ihi ya, ị nwere ike ịrụzi mdb faịlụ na onodu menu nke Windows Explorer mfe.
Naghachi nrụrụ aka Oracle DBF faịlụ nchekwa data.
Mmezi dBase rụrụ arụ, FoxBase, FoxPro na Visual FoxPro DBF faịlụ.